Mashiinka Lamination Extrusion
Mashiinka Daabacaadda Flexo
Mashiinka Samaynta Bacda Qashinka
Mashiinka Sameynta G gashi
Mashiinka Sameynta Maska
Mashiinka Samaynta Boorso
Mashiinka Samaynta Daboolka Kabaha
Mashiinka Mashiinka Kabaha Lagu Sameeyo
Sealing Side Sealing Center Sealing Machine
Markaad isticmaaleyso mashiinka jeexjeexa wax soo saarka, habka jeexitaanka waa in fiiro gaar ah loo yeeshaa oo aan si fudud loo qaadan.
Markaad isticmaaleyso mashiinka jeexjeexa wax soo saarka, habka jeexitaanka waa in fiiro gaar ah loo yeeshaa oo aan si fudud loo qaadan. Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu isku dari doonaa filimka iskudhafan ee BOPP / LDPE filimka isku dhafan, dhibaatooyinka tayada leh ee ka dhaca geedi socodka wax soo saarka dillaaca iyo pr ...
Xakamaynta heerkulka goynta inta lagu jiro sameynta bacda
In geeddi-socodka samaynta bacda, mararka qaarkood shaabadaynta shandaddu ma fiicna. Wax soo saarka habkan loo soo saaray waa mid aan u qalmin. Maxaa sababa dhacdadan? Waa inaan fiiro gaar ah u leenahay heerkulka magaabay kuleylka Waa soo dejin si loo xakameeyo heerkulka magaabay inta lagu jiro samaynta boorsada, haddii heer kulku uusan ahayn ...
Maxay dhererka boorsadu u kala duwan tahay inta bacda la samaynayo?
In geeddi-socodka samaynta bacda, mararka qaarkood dhererka bacda la dhammeeyey way ka duwan tahay. Wax soo saarka habkan loo soo saaray waa mid aan u qalmin. Maxaa sababa dhacdadan? Waa inaan fiiro gaar ah u leenahay hawlgalka ku habboon ee mashiinka samaynta bacda ee ka socda dhinacyada soo socda si looga hortago noocan ah ...
Aagga Warshadaha ee Hengtang River, Tuulada Yaru, Wadada Shangwang, Magaalada Ruian, Gobolka Zhejiang, Shiinaha